तुलसीको राम्री बजारमा !! भिडियो सहित !!
Saturday, 17 November 2018 07:45
यूरोपको व्यस्त ठाउंमा बसेर निरन्तर सांगीतिक छेत्रमा लागिपरेका चर्चित गायक तुलसी सिवाकोटीको राम्री गित सार्वजनिक भएको छ । रोशन श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको गित संगीत निरज श्रेष्ठको रहेको छ । अद्रिसय कुलुङ्गको शब्द र ओम उप्रेती र बिनिता ओलीलेको अभिनय रहेको गित निकै रोमांन्चिक र दर्शक, श्रोताहरुले रुचाउनुहुनेछ भन्नेमा गायक सिवाकोटी ढुक्क छन् । हेर्नुस भिडिओ !!
More in this category: « पोर्चुगलका गायक सुर्य तिवारी बिस्तारै बिस्तारै के भन्न खोज्दै छन्	स्विट्जरल्याण्ड निवासी रिता बिन्दु पाण्डे “मैले भन्दा धेरै माया” को म्यूजिक भिडियोमा »